eNingizimu Afrika ngo-1984.NguMfundisi Desmond Tutu
eNingizimu Afrika ngo-1984 NguMfundisi Desmond Tutu
Desmond Tutu and Nelson Mandela 19 Feb 1990.
Ngo-1984 uHulumeni wethula uMthethosisekelo, owawuwumgogodla wezinqubomgomo zokukhishwa kwabamnyama. Abantu bayalilahla ngokungaqondile futhi ngo-Agasti 1984 kwaqala ukuqhuma kwesigungu esilandelayo. Abangu-1 200 abamnyama bafa kusukela ngo-Agasti 1984 no-1986. Abantu abamnyama babulawa ikakhulukazi ngamabutho okuphepha, cishe njengokungathi yizimpukane. Izingane ziboshiwe.
Izingane zabulawa. Kuthiwa abangu-50 badutshulwa ngemuva ngaphandle kwenkantolo. Angizange ngivele ngisuke ngizwa i-squeak evela kulabo abamhlophe abathi babekhathazekile ngokuhlupheka okumnyama. Lokho kwakuyiqiniso ngempela ukuhlupheka okumnyama, hhayi ukuhlupheka okuzayo esikhathini esizayo. Bathi isimo sokuphuthumayo siphenduliwe.
NgeSonto lika-Easter, ngabona i-Casspir iqhuma phansi eSoweto Highway. NgoMsombuluko wePhasika engxenyeni yethu yaseSoweto, ingxenye enkulu kakhulu, amaCasspirs amane kanye nabasebenzi abathintekayo baphumelela endlini yami.
Umkami wathi, 'Umngcele ulapha' - amasosha asele namakhansela ngemuva kweThekwini Education Conference eyathatha isinqumo esinesibindi mayelana nezingane ezihlala esikoleni futhi sasinokungahloniphi kweziphathimandla ezibonisa amandla abo ezempi uma bezazi Ukutholakala kwamabutho aselokishini kwakuvusa kakhulu.
Sihlangene Njengesizwe Sinye
Desmond Tutu at 85, 2016.
Akukho lutho uMnu. Botha angenza ngikholelwa ukuthi yena noHulumeni wakhe babecabanga ngokuqeda ubandlululo. Uthi siyisizwe esisodwa futhi njengoba nje sijabula ngakho uthi siyisizwe sabantu abancane - okungabonakali futhi okuyingozi kwezingqungquthela. Uma siyisizwe esisodwa, kungani iKNdebele kufanele ihambe ngenxa yalesi simo sokuzimela, kungani abantu baseMoutse befa ukuze banelise imibono yobuhlanga?
Kuyoba nokuphela kweMithetho YePhasi futhi sithi 'Hlanyela!' bese sizwa ukuthi kuzoba khona 'ukuhleleka kwemigwaqo emizileni'. Njengoba abantu abamnyama beyeke ukukhishwa ngokweqile ukuba bangene emadolobheni, ukuhleleka kwamadolobha okuhlelekile kuzosebenza kubo kuphela, ngakho-ke kufanele kusetshenziswe uhlobo oluthile lokulawulwa kwamandla. Kwabe sekukhona ukuziyeka kukaDkt van Zyl Slabbert noDkt Boraine. Abezindaba babedlala ukubaluleka kwabo.
Laba bahlonipha ababili babemukela imibono yethu eside echazwe yiPhalamende eNingizimu Afrika yinto elula. I-PFP ibilokhu inika umhlaba umbono wokukhohlakala wokuthi sinenkululeko yentando yeningi yephalamende lapho sineqembu elilodwa lenkampani, elicindezelayo futhi elingenabulungisa nokuhlukumeza ukubeka phansi ukuphikiswa nokuphikisana.
Sasivinjelwe, sigcinwe noma sinekhokhwa ngokuhlukunyezwa okukhulu! Izingane zethu zazifa. Izwe lethu lalivutha futhi liphuma. Kwakukhona ukuthokoza okuningi okwamanje ezweni lethu phakathi kwezinhlanga. Masibe sesifisa kangaka ekubhubhiseni. Singaphila ndawonye njengabantu abodwa, umndeni owodwa, omnyama nomhlophe ndawonye.